Animation-ka E-maylku run ahaantii ma shaqeeyaan? | Martech Zone
Arbacada, Oktoobar 3, 2012 Monday, June 8, 2015 Meen Boriboune
Waxaad haysataa 30 ilbidhiqsi si aad uqabsatid dareenka akhristayaashaada markay dhagsadaan emaylkaaga. Runtii kani waa daaqad yar. Haddii aad aniga oo kale tahay, markaa waad u maleyn kartaa taas animation waa khatar yar in loo adeegsado suuqgeynta emaylka, laakiin waxaad dooneysaa inaad soo jiidato dareenka dadka qaata. Marka, maxaad qabataa
Si kastaba ha noqotee, ka dib markaad dhex marto suuqgeynta emailkeena feejignaanta isbeddelka kafaala-qaadaha, tani waxay u noqon kartaa qalab la yaab leh suuq-geynta emaylka haddii si wax ku ool ah loogu daro.
Kaliya maahan animation-ka inay tahay hab fiican oo lagu soo jiito dareenka akhristayaasha, laakiin sidoo kale waxay u oggolaanaysaa suuqleyda inay hal-abuur u soo jiitaan badeecooyin badan, dalabyo, ama ugu yeeraan ficillo. Sidoo kale waa inaadan u oggolaan animation-kan inuu saameyn ku yeesho samatabbixintaada. Ha yaraynin cabbirka animation-ka, ka dhig GIF-ga la kiciyey oo keliya 6 loox, oo hubi in qaabka ugu horreeya uu ku soo koobayo farriinta (haddii uu jiro) si markaas e-mayladaada aysan wax dhibaato ah kala kulmin qabashada galka Spam-ka.
Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan qaabeynta iyo gaarsiinta animation emaylkaaga, fiiri Delivra Animation-ka emayllada: Sida wax ku oolka ah loogu daro isbadalkan ugu dambeeyay.
Soo Degso Waraaqda Cad!
Tags: animationTusmada EmailkaEmail MarketingMacaamiishanWarqad cad
Meen waa arday Suuqgeynta Butler oo la tababaranaya kooxda DK New Media. Waajibaadka Meen waxaa ka mid ah cilmi baaris iyo wax soo saar ka kooban macaamiishooda, iyadoo la raacayo jihada Jenn Lisak.